प्रचण्डको अडान कुलमानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने तर ओली किन मान्दैनन …हेर्नुहोस! – Nepal Online Khabar
प्रचण्डको अडान कुलमानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने तर ओली किन मान्दैनन …हेर्नुहोस!
काठमाडौं -: कुलमान घिसिङलाई वि,द्युत प्रा,धिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर सामाजिक सञ्जालमा द,बाब बढिरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने घिसिङसँग अस,न्तुष्ट बनेका छन् ।
घिसिङको पदावधि यही भदौ २९ गते सकिँदैछ । देशव्यापी रुपमा सोसल मिडियामा घिसिङलाई नै उक्त पदमा निरन्तरता दिनुपर्ने माग भैरहेको छ । कतिसम्म भने गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले घिसिङलाई पूनः नियुक्ती गरेका समाचार पनि आएका थिए ।
तर, उक्त समाचारमा सत्यता छैन् । विभागीय मन्त्री उर्जामन्त्री वर्षमान पुनपनि कुलमानसँग खासै स,न्तुष्ट नभएको बुझिएको छ ।घिसिङले सामाजिक सञ्जालमार्फत पूनः नियुक्तीको लागि द,बाब बढाएको भन्ने मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको बुझाई छ । तर, घिसिङले यसबारेमा स्प,ष्टीकरण दिईसकेका छन् ।
उनले कसैले फेक अकाउन्टमार्फ गलत प्रचार गरिरहेको भन्दै सचेत हुन आग्रह गरेका छन् । घिसिङकै का,रण नेपालमा लो,डसेडिङ अ,न्त्य भएको आम सर्वसाधरणको बुझाई छ । हुनपनि उनको व्यवस्पाकीय क्ष,मताकै कारण यो सम्भव भएको विज्ञहरुको भनाई छ ।
तत्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको पालामा उनलाई कार्यकारी प्रमुख बनाईएको थियो । त्यतिवेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए ।प्रा,धिकरणका पूर्व कार्यकारी प्रमुख मुकेशराज काफ्लेले घिसिङकै कारण लो,डसेडिङ अ,न्त्य नभएको दा,बी गरेका छन् ।
तर, उनले घिसिङको कारण विद्युत चु,हावट घटेको भने स्विकारेका छन् ।प्रा,धिकरणमा घिसिङ दोहोरिन्छन् वा दोहोरिँदैनन त्यो हेर्न बाँकी छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली भने घिसिङसँग अस,न्तुष्ट रहेको बुझिएको छ ।
उता, नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले भने घिसिङ लाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने अडान लिएका छन् । उनले राईट म्यान ईन राईट पोष्टका हिसाबले पनि कुलमान प्रा,धिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा रहनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
Prevअब खाडीबाट खर्चविहीन नेपाली नि:शु,ल्क आउन पाउँछन्, होटल पनि फ्रि : मन्त्री भट्टराई,,, हेर्नुहोस् भिडियो सहित
Nextबजार मूल्यभन्दा प्रतिकेजी ४५० रुपैयाँ सस्तोमा खसीको मासु बिक्री गर्दै भाटभटेनी…हेर्नुहोस् ।
भोलिदेखि साझा यातायात सञ्चालन हुने…हेर्नुहोस् । सेयर गरौ !
रचना रिमाल लक’डाउन यता ६० गीत रे’कर्ड गराउने व्यस्त गायिका…हेर्नुहोस् ।